Maraykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay samaysanayso gantaalo cusub - BBC News Somali
Maraykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay samaysanayso gantaalo cusub
31 Luulyo 2018
Image caption Kuuriyada Waqooyi ayaa samaysay tijaabadii gantaalada ugu ridada dheer 2017
Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu soo waramayaa in ay samaysanayso gantaalo hor leh oo hubka halista ah xilli dhawaan uu aad usoo hagaagay xiriirka kala dhaxeeya Maraykanka kadib markii la gaaray heshiis ah in ay dhinto barnaamijkeeda hubka Nuyuukleerka.
Sargaal aan magaciisa la sheegin oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa wargeyska Washington Post u sheegay in dayax gacmeedyada sirdoonka Maraykanka ay sawireen dhaqdhaqaaq xoog leh oo muujinaya in lasoo saarayo gantaalada hubka halista ah.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay sargaal sheegay in aysan ka warhaynin illaa heerka hawsha la gaarsiiyay.
Madaxweyne Trump ayaa bishii June la kulmay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Waxay ahayd markii koowaad oo ay kulmaan madaxweyne Maraykan ah iyo mid Kuuriyada Waqooyi, waxayna ku heshiiyeen in la baabi'iyo barnaamijka hubka Nuyuukleerka, iyada oo uu Trump sheegay in Kuuriyada Waqooyi aysan ahayn halis.
Image caption Kulankii Trump iyo Kim
Image caption Saxiixyada labada hoggaamiye shirkii Singapore ee June dhacay
Madaxweyne Trump ayaa lagu eedeeyay in uu heshiis la saxiixday Kuuriyada Waqooyi isaga oo aanan ballanqaadyo cadcad ka haynin Kim Jong-un.
Warka hadda soo baxayna waxa uu sare usii qaadayaa eedeymihii horey loogu jeediyay.